မနက်က ပြေးရင်းလွှားရင် ကျူးကျော် ရပ်ကွက် ရောက်တော့…. ကျူးကျော် အာဝါဒီး တွေပဲလို့ တွေးခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ရွံမိတယ် – News Myanmar
မနက်က ပြေးရင်းလွှားရင် ကျူးကျော် ရပ်ကွက် ရောက်တော့…. ကျူးကျော် အာဝါဒီး တွေပဲလို့ တွေးခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ရွံမိတယ်
မနက်က ပြေးရင်းလွှားရင် ကျူးကျော် ရပ်ကွက် ရောက်တော့…. ကျူးကျော် အာဝါဒီး တွေပဲလို့ တွေးခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ရွံမိတယ် Zawgyi မနက္ကေျပးရင္းလႊားရင္ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ေရာက္ေတာ့ ပိတ္မိသြားပီ ဘယ္မွကူးလို႔မရေတာ့တဲ့အေျခအေနေရာက္သြားတယ္ ဟိုဘက္ကူးတဲ့အေပါက္ကလည္းပိတ္ထားတယ္။ အဲ့ဒီက်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မွာပဲခဏပုန္းေနခဲ့ရတယ္။ အဲ့အခ်ိန္ကဗိုက္ဆာ အိပ္ေရးလည္းမဝ သူတို႔ေဖ်ာ္တိုက္တဲ့ေကာ္ဖီေသာက္ရတယ္ ေန႔လည္ေရာက္ေတာ့လဲသူတို႔ကပဲခ်က္ေကြၽးတဲ့ထမင္းကိုစားခဲ့ရတယ္။ ￼ ￼ ￼ […]